Student Testimonials – Page 10 of 16 – Crown Education
ပညာရေး ရည်မှန်းချက်ကြီးမား သောကျောင်းသား/သူများ အနေဖြင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်ကြီးများ (University of Toronto, University of British Columbia, McGill University, University of Cambridge, Harvard ...
AMERICAN GRADE (12) PROGRAM (ACT– GAC) မှ ကျောင်းသား မောင်ဝင်းတင့်ဦးသည် WESTERN SYDNEY UNIVERSITY သို့ SCHOLARSHIP နှင့်အတူ FOUNDATION YEAR ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိ
❑ ညီမလေးအနေနဲ့ iGCSE အပြီး ရှေ့ဆက်ရမယ့်ပညာရေးအတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ခဲ့လဲ – iGCSEပြီးတော့ ပြည်ပသင်ကြားရေးကို ဘယ်တော့လောက် စပြင်ဆင်မယ်ဆိုပြီး ညီမမိဘတွေနဲ့ တိုင်ပင်ခဲ့တယ်.. ပြည်ပပညာရေး နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို မတူညီတဲ့ ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေကတစ်ဆင့် လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ...
မြန်မာကျောင်းသား/သူတွေကြား နာမည်ရလူသိများတဲ့ AIT School of Management တွင်-Master of Business Administration (MBA)Master/ M.Sc. in International FinanceMaster/ M.Sc. in Business Analytics ...
❝အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ State University of New York, Oswego (SUNY Oswego) တွင် စာသင်နှစ် တစ်နှစ်တာကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်အတူ 50% scholarship + 1,500 USD ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည့် မောင်မာန်ဟိန်းခန့်❞
Perfect Student Award ဆုရ ကျောင်းသား မောင်မာန်ဟိန်းခန့်အနေနဲ့ CROWN Education ၏ Higher Secondary Schoolဖြစ်တဲ့ Royal Academic Instituteမှာ GAC Grade 12 program ...
ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိ Western Sydney University တွင် Bachelor of Engineering ပရိုဂရမ်ကို FOUNDATION YEAR ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် တက်ရောက်သင်ကြားခွင့် ရရှိသည့် GAC ကျောင်းသား မောင်ဝင်းတင့်ဉီး
ကျွန်တော် O levelပြီးတော့ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်သွားမလား၊ ဒီမှာတစ်နှစ်လောက် ပြင်ပြီးမှ သွားရင်ကောင်းမလား စဥ်းစားပြီး ကိုယ့်မှာလည်း လိုအပ်တာတွေများနေသေးတယ်ထင်တာနဲ့ ဒီGAC Grade 12 progamကို တက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ GACတက်နေရင်းနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်တဲ့အခါ တကယ် ...